Brain Tumors (ဦးနှောက်အကျိတ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Brain Tumors (ဦးနှောက်အကျိတ်)
Brain Tumors (ဦးနှောက်အကျိတ်) ကဘာလဲ။
ဦးနှောက်ဆဲလ် ဒါမှမဟုတ် ဦးနှောက်တဝိုက်မှာရှိတဲ့ဆဲလ်တွေ ပုံမှန်မဟုတ်ပွားခြင်းကြောင့် အဖု၊ အကျိတ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ ထိုအကျိတ်ရှိဆဲလ်တွေက သေမသွားသလို၊ ဆဲလ်အသစ်တွေနဲ့လည်း အစားမထိုးဘဲ ခန္ဓါကိုယ်မှလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ ဆက်လက်ကြီးထွားနေတာဖြစ်တယ်။ ကင်ဆာလည်းဖြစ်နိုင်သလို ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ အဖု၊ အကျိတ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဦးနှောက်အကျိတ်တွေဟာ တခြားသောကင်ဆာဆဲလ်တွေကနေ ဦးနှောက်ဆီသို့ ပျံ့လာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Brain Tumors (ဦးနှောက်အကျိတ်) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပြီး လူကြီးတွေမှာဆိုရင် ဦးနှောက်ဆဲလ်အကျိတ်နဲ့ ဦးနှောက်အမြှေးပါးဆဲလ်အကျိတ် တွေကပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ဦးနှောက်အကျိတ်ဖြစ်ရန် အားပေးတဲ့အခြေအနေတွေကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်ချေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
Brain Tumors (ဦးနှောက်အကျိတ်) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အကြောင်းမရှိ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း
ခြေထောက် သို့ လက်တို့တွင် ထိတွေ့မှု၊ လှုပ်ရှားမှုအာရုံတဖြေးဖြေးပျောက်ဆုံးခြင်း
တက်ခြင်း ၊ အထူးသဖြင့် ယခင်က တက်တတ်သော ရာဇဝင်မရှိထားဘဲ တက်ခြင်း
ဖော်ပြထားသောလက္ခဏာများအပြင် တခြားလက္ခဏာများလည်းရှိနိုင်တာကြောင့် စိုးရိမ်သည်များရှိပါက ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
Brain Tumors (ဦးနှောက်အကျိတ်) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဦးနှောက်အကျိတ်ဟာ ဦးနှောက်ကိုယ်တိုင်မှာ အကျိတ်ပေါ်တာဖြစ်နိုင်သလို၊ တခြားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေမှ ကင်ဆာဆဲလ်တွေပျံ့လာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဦးနှောက်တွင်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်းကတော့ ဦးနှောက်နှင့်ကပ်လျက်ရှိသော အမြှေးပါး၊ အာရုံကြောများ၊ pituitary ဂလင်း၊ pineal ဂလင်းတို့ဆီမှ ဆဲလ်များမှဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဘဲ တခြားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းမှ ဦးနှောက်ကိုပျံ့လာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကင်ဆာရှိခဲ့ဖူးသူတွေမှာ ဦးနှောက်အကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။
ဦးနှောက်ကိုယ်တိုင်မှအကျိတ်ဖြစ်ခြင်းဟာ တခြားနေရာမှကင်ဆာဆဲလ်တွေပျံ့လာတာလောက် အဖြစ်မများပါဘူး။
Brain Tumors (ဦးနှောက်အကျိတ်) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အသက်အရွယ်- အသက်ကြီးလေလေ၊ ဦးနှောက်အကျိတ်ဖြစ်နိုင်ချေများလေလေဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။
ဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့ခြင်း – ကင်ဆာကုသရန်သုံးသောဓါတ်ရောင်ခြည်များ၊ သို့ ဗုံးများတွင်သုံးတတ်သော ဓါတ်ရောင်ခြည်များနှင့် ထိတွေ့ဖူးပါက ဦးနှောက်အကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ များပါတယ်။
မိသားစုရာဇဝင် – မိသားစုတွင်ဦးနှောက်အကျိတ်ကင်ဆာရှိဖူးပါက သို့ မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါတစ်မျိုးမျိုးရှိပါက ဦးနှောက်အကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေကနည်းပါတယ်။
Brain Tumors (ဦးနှောက်အကျိတ်) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ခံစားရသောလက္ခဏာများ၊ မိသားစုဆိုင်ရာ ရာဇဝင်များ လိုအပ်သည်များကိုမေးမြန်းပြီး အာရုံကြောဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများအပါအဝင် စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုများလုပ်ခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်အကျိတ်ကင်ဆာကို ရှာဖွေသိရှိနိုင်ပါတယ်။
တခါတရံမှာတော့ တခြားသောစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရနိုင်တယ်။ စတီစကမ်၊ အမ်အာအိုင်ကဲ့သို့ ပုံရိပ်ရိုက်ကူးမှုများနှင့် ဦးနှောက်အသေးစိတ်ပုံရိပ်ရိုက်ကူးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သွေးပြန်ကြောထဲ ဆိုးဆေးထိုးပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော အကျိတ်များ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောသွေးကြောများကို X-rays ရိုက်ကူးကြည့်သည့် angiogram နည်းဖြင့်လည်း စစ်ဆေးရနိုင်ပါတယ်။
Brain Tumors (ဦးနှောက်အကျိတ်) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
များသောအားဖြင့်ခွဲစိတ်ဖယ်ထုတ်ရတတ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ရန် အဆင်မပြေသောနေရာတွင် အကျိတ်ရှိနေပါက ဓါတ်ရောင်ခြည်နည်း သို့ ဆေးသွင်းသောနည်းဖြင့် ကင်ဆာကျိတ်ကိုသေးသွားစေသောနည်း သုံးတတ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီးသောအခါမှာလည်း ကျန်ရှိနေသော ကင်ဆာဆဲလ်များကိုဖယ်ပစ်ရန် နည်းနှစ်နည်းသုံးတတ်ပါတယ်။
ကုသမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်ချေတွေ၊ ရလဒ်တွေ၊ သက်ရောက်မှုတွေကို သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ပြန်လည်နာလံထဖို့အတွက် ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ ဆက်လက်ကုသဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ- ဟန်ချက်ပြန်ညီဖို့အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်း၊ ကုသမှုများ၊ စကားပြောခြင်း၊ ခံစားချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း၊ မျိုခြင်းတို့အတွက် စကားပြောလေ့ကျင့်ခြင်းများ။
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/brain-tumor/home/ovc-20117132. Accessed 10 June, 2016.
Brain Cancer Health Center.
http://www.webmd.com/cancer/brain-cancer/brain-tumors-in-adults. Accessed 10 June, 2016.